Mul’ata nu ceesisu qabannee injifannoo caaluf qophaa’utu nurra jiraata – obbo Shimallis – Fana Broadcasting Corporate
Mul’ata nu ceesisu qabannee injifannoo caaluf qophaa’utu nurra jiraata – obbo Shimallis
Finfinnee, Onkololeessa 8, 2012 (FBC) – Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan jiraattota magaalaa Naqamtee fi naannawa ishee waliin mari’atan.
Waltajjicharratti hoggansi naannoo, godina Wallagga Bahaa fi magaalaa Naqamtee, jaarsoliin biyyaa, abbootiin Gadaa fi jiraattonni argamaniiru.
Obbo Shimallis gaaffilee hirmaattota waltajjichaarraa ka’aniif deebii laataniiru.
Hojiileen proojaktoota misoomaa kanneen akka daandii haaraa, daandilee miidhaman 11 suphuu, ijaarsa buufata xiyyaaraa, ibsaa diriirsuu, teelekoom, tajaajila hoospitaalaa sadarkaasaa eeggate ijaaruun xiyyeeffannaa argateera jedhaniiru.
Dargaggoonni dhibaa’ummaa keessaa ba’uun aadaa hojiisaanii fooyyeffachuu qabu; nutis carraa hojii uumuuf yoomiyyuu caalaa ni hojjenna jedhaniiru.
Mootummaan liqii ni mijeessa, maashinaroota ni dhiyeessa, tiraaktara dargaggootaaf ni dhiyeessa, dargaggoonni gurmaa’uun carraa kanatti fayyadamuu qabus jedhan.
Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka beeksisetti, qaala’insa jireenyaa furuu keessatti hojii mootummaan raawwatu cinaatti qonnaan bultoonni gurmaa’uun hojjechuutu isaanirraa eegama jedhaniiru.
Lixa Itoophiyaa giddu galeessa taasifachuun naannolee ollaa kallattii lixaan jiran waliin magaalaa itti wal geenyee mari’annu ta’as jedhaniiru.
Kunimmoo dadammaqiinsa diinagdee magaalaa fi umataa keessatti shoora olaanaa qabaata.
Gaaffii ummanni kaasu hunda mootummaa federaalaa waliin ta’uun, deebii akka argatu eeranii, ummanni obsaan akka eeguu fi deeggaru gaafataniiru.
Yaadaa fi mul’ata nu ceesisu qabannee kaane imaammataa fi tarsiimoon utubuun bu’aa fi injifannoo caaluf qophaa’utu nurra jiraata jedhan.